UMaThethiwe: Umhlengikazi kwezempilo, kwezenhlakahle nakwezepolitiki - Bayede News
NgoMandulo wonyaka we- 1944 ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni i-African National Congress Youth League (uVukayibambe), wayeyedwa owesifazane owayekhona kulowo mbuthano. KwakunguNkk uNotsikelelo Albertina Sisulu (uMaThethiwe). Wayesanda kushada noMnu uWalter Sisulu, owakhethwa waba sesingugwini esikhulu se-ANC Youth League, iholwa nguMnu uMzwakhe Anton Lembede. Umama wakwaSisulu ube nomyeni wakhe kwaze kwaba umphefumulo kababa uSisulu uyaphuma ngowezi-2003 sebeshade iminyaka engama-59. UXhamela (uMnu uSisulu) uhlale iminyaka engama-27 ejele ngakho isikhathi asichitha nomndeni wakhe sibe sincane ngoba ubengumholi wepolitiki futhi eboshwe eRobben Island. Ngesikhathi ekhuluma emshadweni kaMnu uSisulu, uMnu uLembede wathi: “Nkosazana ngiyakuzwela ngoba namuhla ushada nomuntu vele oseshadile. Lo muntu oshada naye namhlanje ushade nomzabalazo wenkululeko.” Umama wakwaSisulu ubeyintombazane yasemakhaya ezalelwe kuTsomo, e-Eastern Cape, mhla zingama-21 kuMfumfu ngowe-1918.
Ukhule engumzali ezinganeni zakwabo ngoba unina wayegula kunguyena uMaThethiwe okwakufanele azinakekele. Ube ngumntwana okhaliphile futhi enikwa nezikhundla zokuphatha ezikoleni kusukela esemabangeni aphansi. UMaThethiwe uqeqeshelwe ubuhlengikazi, wasebenza esibhedlela iJohannesburg General. Uhlangane noMnu uSisulu ngowe-1941, ngaleyo nkathi engakayingeni indaba yepolitiki. Ngesikhathi ehamba imihlangano yepolitiki nomyeni wakhe inhlansi yokheleka, wagcina esazi ngombangazwe wawuthanda, wabamba iqhaza kuwo. Okubalulekile ngomama wakwaSisulu ukuthi ubengumama hhayi ezinganeni zakhe kuphela kodwa ugcine esenikwa nesithunzi futhi ehlonishwa ngokuba “nguMama Wesizwe.” Wavuleka amehlo ikakhulukazi uma ebona indlela abamhlophe ababephatha ngayo aboHlanga.
Okwafika kwaba usawoti esilondeni kungesikhathi abaphathi besibhedlela bemphoqa ukuthi asebenze kushone unina, wagcina engakwazanga nokuya emngcwabeni wakhe e-Eastern Cape. Yikhona lokhu okwenza kwaqina ukusondelana kwakhe noKhongolose ngoba ngesikhathi i-ANC ibhala usomqulu, i-African Claims, ngowe-1943, eyagcina isiwumhlahlandlela waMalungelo Abantu, umama uSisulu waba neqhaza elikhulu. Uzimbandakanye ne-ANC Women’s League ngonyaka we-1948, waba ngomunye wabaholi abavelele. Ube semkhankasweni ogxeka iBantu Education ngonyaka we-1953, wanikela ngomuzi wakhe wathi akufundiswe kuwona izingane imfundo eyiyo hhayi loluya hlobo lwemfundo. Inkinga abahlangabezana nayo nabanye abazali ababekhahlela ngazo zombili iBantu Education ukuthi yayingekho imali yokuthi kube nemfundo yangasese.
Ngowe-1952 uHulumeni wobandlululo waqinisa imithetho yokuthi abesifazane baphathiswe odompasi okwagcina sekuholele kunhlabaluhide eyaya e-Union Buildings ngowe-1956 ziyisi-6 kuNcwaba. Umama wakwaSisulu wayekhona kuleyo mashi. Waboshwa ngokuba sekhaleni le mibhikisho kodwa uMnu uRolihlahla Mandela wabakhipha ejele, ebamele. Ubehola izinhlelo ezahlukene ze- ANC Women’s League ikakhulukazi lezo ezazibukela phansi futhi zedelela imithetho yobandlululo. Waba yilungu leFederation of South African Women (FEDSAW) eyayiholwa ngumama uLillian Ngoyi. Uboshiwe uMnu uSisulu kanye noMadiba ngecala laseRivonia ngowe-1964 bagwetshwa udilikajele. UMaThethiwe wameseka umyeni wakhe ngendlela eyisimanga yize esenomqansa wokukhulisa izingane zakhe yedwa. I-ANC nePan Africanist Congress of Azania (PAC) bavalwa umlomo ngemuva kwesibhicongo saseSharpeville sangowe-1960. Abaholi balezi zinhlangano basoshwa, bagqunywa emajele abanye bancamela ukuya ekudingisweni.
Iminyaka engama-40 yoholo luka-Ayatollah
Umama wakwaSisulu waqala wasebenza umshoshaphansi namalungu oMkhonto Wesizwe, uphiko lwezempi lwe- ANC, nabaholi ababesekudingisweni nababesemajele. Umama wakwaSisulu waboshwa ngaphansi koMthetho iGenaral Laws Amendment Act eyayigunyaza ukuthi abantu baboshwe iminyaka ize ibe mithathu bengabekiwe amacala. Uke wafika kwelikabhanana ngowe-1981 eyokwethula inkulumo engqungqutheleni yeSouth African Indian Council, isakhiwo sobandlululo okwakuhloswe ngaso ukutshala imfundisoze kwaboMdabu baseNdiya. NgoNcwaba ngowe-1983 kwasungulwa i-United Democratic Front (UDF) eCape Town, waba ngomunye woMengameli bayo benoMnu u-Archie Gumede noMfundisi u-Allan Boesak.
Wayekhombisa ukuvuthwa nokusabalala emqondweni uma kuziwa ezintweni ezithinta ipolitiki. Kusukela ngowe-1984 wayesebenzela uDkt u-Abu Baker Aswat, ilungu nomholi we- Azanian People’s Organization (AZAPO) eSoweto, kwaze kwaba uyabulawa ngowe-1989. Uhole ithimba le-UDF laya e-England nase-USA layokhala ngenqubo yobandlululo. Yilona leli thimba elahlela ukubhikishela uMnu uFW de Klerk efike eLondon. Umama wakwaSisulu uhlonishwe ngoxhaxha lwezindondo okubalwa neziqu zobudokotela yiNyuvesi yaseJohannesburg. Ushonele emzini wakhe eLinden, eGoli, mhla zimbili kuNhlangulana ngowezi-2011. Ngowezi-2018 bekubungazwa ikhulunyaka lakhe kunemicimbi ehlukene ezweni lonke.
nguMenzi Jele Feb 28, 2020